Uru nke PVC mkpọchi ala-News-Topflor China nwere oke
Echiche:26 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2021-04-13 Mmalite: Saịtị
N’uche sara mbara, ụlọ PVC bụ nnukwu ezinụlọ nke ụdị dị iche iche, gụnyere akpụkpọ anụ ụlọ, ụlọ plastik ụlọ, ụlọ plastik azụmahịa, ịkwanyere onwe ya, ịkwanyere mkpọchi PVC, mpempe akwụkwọ PVC nkịtị, wdg. n'ihi na ụlọ paving bụ mkpọchi n'ala. Ka anyị leba anya n’ihe kpatara ya:
Akwa mma na nchedo gburugburu ebe obibi
N'ime imepụta ala mkpọchi PVC, a nabatara teknụzụ ịpị, ọ dịghị ihe ọ bụla chọrọ n'oge a na-etinye ya, yana njikọ chiri anya dị n'etiti ala nwere ike iji gbochie ịhapụ ihe ndị na-emerụ ahụ dị ka formaldehyde site na isi iyi ahụ. Mgbe etolite ala mkpọchi ahụ, ihe owuwu ahụ siri ike, na mmetụta nke mmụba ọkụ na mgbatị na-eleghara anya, ọ nwere ogologo ndụ ọrụ.
Jupụta na njedebe-elu
Ihe nkiri ifuru nke PVC mkpọchi na-agbaso teknụzụ mbipụta dị elu, ma ọ bụ ọka osisi na-eitationomi, ọka ọka ma ọ bụ ọka kapeeti, ọ nwere ike nweta nrube isi dị elu na usoro siri ike. Ogo ụlọ mkpọchi ahụ dịkwa nso na ala osisi a na-anabatakarị, tile seramiiki, na ala marble. Mgbe emechara elu ala ahụ, mmetụta ọrụ zuru ezu ga-adị elu-njedebe. Site na paving mmetụta, ọ na-esiri ndị na-abụghị ndị ọkachamara ike ịchọpụta ma ọ bụ ala mkpọchi PVC. Ọ nwere ike igosipụta ikpo ọkụ na ịdị nro nke ala osisi; ịdị ọcha na ịdị mma nke ala taịl nile; na ikuku na okomoko nke marble ala!
N'ime usoro ntanye nke mkpuchi mkpọchi PVC, ọ dịghị mkpa ịme akwa ciment ciment dị ka tile ma ọ bụ okwute marble, ọ dịghịkwa mkpa ịkwanye eriri dị ka ala osisi, ọ bụrụhaala na ala dị larịị, ọ nwere ike ịbụ ozugbo okporo ụzọ. Enwere mkpọchi n'elu ala ọ bụla, enwere ike ijikọ ya na ya. Ọ bụrụhaala na a ga-achọ ihe eji eme ihe dị mfe n'ịkwasa, nkwonkwo dị n'etiti ala ahụ siri ike mgbe ị kwachara ya! Onweghi mmiri nwere ike ibanye!
Elu nke ala mkpọchi PVC bụ akwa akwa na-eguzogide UV, nke nwere nguzogide unyi dị ezigbo mma. Agaghi apucha ya aru kwa ubochi. Dị ka ala taịl, naanị ị chọrọ broom ma ọ bụ mop iji sachaa mgbe unyi ruru. Enwere taboo na ojiji nke ala ọ bụla. Dị nnọọ ka anyị na-eji taịliki seramiiki na ala marble, anyị aghaghị izere hama na ihe ndị ọzọ siri ike. Mgbe anyị na-eji ala osisi eme ihe, anyị kwesịrị izere ịkpọtụrụ anwụrụ ọkụ na ọkụ ndị ọzọ na ọkụ ndị gbara ọchịchịrị; mgbe ị na-eji mkpọchi PVC N'ime usoro ala, zere ịmara mma nke mma.
Ọnụahịa nke ụlọ mkpọchi PVC nwere uru doro anya ma e jiri ya tụnyere osisi osisi siri ike, tile seramiiki, ala mabul, wdg. Nke a bụ n'ihi na ọ dịghị mkpa ịzụta nnukwu osisi dị oke ọnụ dị ka ala osisi siri ike na usoro mmepụta; ọ dịghị achọ mgbagwoju anya Production usoro; ọ dịghị mkpa ịzụta nkume ndị dị oké ọnụ na usoro nhazi dị mgbagwoju anya dị ka ala marble.
Locklọ mkpọchi PVC enwetawo ọnụọgụ dị elu na mba ọzọ, mana ọ ka bụ ihe ọhụrụ na ahịa mmelite ụlọ. Ihe ọ bụla ọhụrụ ga-abụ ajụjụ mgbe niile na mbido, ụfọdụ ga-eji nke nta nke nta pụọ ​​na olu obi abụọ, ebe ndị ọzọ ga-etolite ma tokwa olu olu obi abụọ, ma mesịa duga ọhụụ ọhụrụ. Ogwe mkpọchi PVC bụ ezigbo mma yana ọnụ ala dị ala, kwekọrọ na ebumnuche ebumnuche nke ahịa ụlọ mma; iji ihe eji emeghari nkpuchi ahihia ndu dika ihe bu isi, ihe di nma ma di nma.